यस्तो रहेछ 'भद्रगोल' रोकिनुको कारण… |
यस्तो रहेछ ‘भद्रगोल’ रोकिनुको कारण…
On: २०७६ भाद्र १३ गते, शुक्रबार, ०७:५६ बजे प्रकाशित
काठमाडौं। नेपालमा धेरै टेलिसिरियलहरु चलेपनि अविछिन्नसम्म चल्ने भने विरलै छन्।
यस्तै पछिल्लो सयम दर्शकसामु प्रिय बनेको टेलिसिरियल हो, ‘भद्रगोल’। तर, अहिले यो रोकिँदा आम–नेपालीभाषी दर्शकहरुलाई खल्लो लागेको दर्शकहरुको प्रतिक्रियाा फेसबुक, ट्वीटर तथा अन्य सामाजिक संजालमा पढ्न पाइन्छ।
आम दर्शकहरु ‘भद्रगोल’किन रोकियो भनेर जिज्ञासु बनिरहेको बेला ‘भद्रगोल’का मुख्य पात्र तथा ‘भद्रगोल’का लेखक/निर्देशक अर्जुन घिमिरे(पाँडे)ले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमा लामो स्टाटस पोष्ट गर्दै ‘भद्रगोल’ रोकिनुको प्रमाण पेश गरेका छन्।
पोष्टमा उनले ‘भद्रगोल’उत्पादक कम्पनी र प्रशारक हबबीचको सम्झौता गत असार मसान्तमै सकिएको भनी मुख्य कारण देखाएका छन्।
उनको पोष्टमा केही असन्तुष्टिका शब्दहरु पनि देखिन्छन्।
‘दुर्भाग्यको कुरो ‘भद्रगोल’को नाम, डिजाइन ,लेखन, निर्माण, निर्देशन गर्ने हामी सर्जकहरुसँग भद्रगोल नामको अधिकार छैन। एउटा सर्जकले सिर्जना गरेको सम्पूर्ण अधिकार सर्जकमै हुनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर पहल गर्यौ तर अधिकार पाउन सकेनौं। एउटा सर्जकको हिसाबले सिर्जना गर्ने मान्छेलाई सबैभन्दा प्यारो आफ्नो सिर्जनानै हुन्छ होला।’ उनले पोष्टमा भनेका छन्।
अन्य सम्बन्धित समाचार: सुनिन छाड्यो सारङ्गीको धुन
उनको पोष्टको यो अनुच्छेदले उत्पादक कम्पनी र प्रशारक हबबीच नामको बारेमा कुरा नमिलेको छनक बुझ्न सकिन्छ।
साथै उनले आम नेपालीभाषी दर्शकहरुलाई अब कसरी जाँदा ठिक हुन्छ? के गर्दा ठिक हुन्छ? भनेर सल्लाह तथा सुझावसमेत मागेका छन्।
यसो भन्छन् अर्जन घिमिरे(पाँडे):
२०७६ भाद्र १३ गते, शुक्रबार, ०७:५६ बजे प्रकाशित